नयाँ तथ्यः करोडौँ वर्ष अघि डाइनोसरमा पनि थियो क्या‘न्स‘र ! – Jagaran Nepal
नयाँ तथ्यः करोडौँ वर्ष अघि डाइनोसरमा पनि थियो क्या‘न्स‘र !
एजेन्सी । क्यान्सर भन्ने बित्तिकै जो कोही सजिलै भन्न सक्छ यो प्राणघातक रोग हो । बदलिँदो जीवनशैली तथा प्रदूषणलगायतका कारण पछिल्लो समयमा विश्वमा क्या‘न्स‘र रोगीहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांक आइरहेको बेला फेरी यस्तो तथ्य सार्बजनिक भएको छ ।
आधुनिक युगमा मानिसका लागि ड‘रला‘ग्दो रोग करोडौँ वर्ष अघि लोप भएको मानिएको डाइनोसरमा समेत क्यान्सर जस्तो प्रा‘ण‘घा‘तक रोग हुने गरेको वैज्ञानिकहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सन् १९८९ मा क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तमा डा इनोसरको ह ड्डी फेला परेको छ । ७ करोड ६० लाख वर्ष पुरानो उक्त हड्डीमा देखिएको एउटा असाधारण बनोटका विषयमा वैज्ञानिकहरुले अध्ययन जारी राखेका थिए । ह ड्डीको उक्त बनोट ह ड्डी टुटेका कारण भएको यसअघि अनुमान गरिएको भएता पनि अन्ततः वैज्ञानिकहरुले उक्त डाइनोसरमा क्या न्सर भएको पुष्टि गरेका छन् ।
लेसेन्ट अन्कोलोजिकल जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार शाकाहारी डायनोसरको ह ड्डीमा जुन वि कृति देखिएको थियो त्यो हड्डीको क्या न्सर अर्थात् ओस्टियोसार्कोमाका कारण भएको थियो ।